Tafiditra Tanteraka Ao anatin’ny Fahazoana Aina Ara-Toekarenan’i Côte d’Ivoire ny Nomerika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Avrily 2018 5:27 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, Español, Français
Fotoam-panofanan'ny Agitel ao Abidjan 2017 avy amin'i Modjou CC-BY-40
Taorian'ny fanitsiana ara-toekarena matanjaka, sy ireo fanavaozana ara-ketra sy araka ny lalàna ary ny fanombohan'ny fananganana fotodrafitrasa lehibe, inona indray ny dingana manaraka amin'ny fivoarana ara-toekarenan'i Côte d’Ivoire?
Natolotr'i Alassane Ouattara tamin'ny taona 2015, rehefa voafidy indray hitantana ny firenena izy, manana tanjona hahatonga ny firenena ho hery iray misandratra amin'ny taona 2020 ny drafi-pirenena fampandrosoana na ny plan national de développement de la Côte d’Ivoire (PND). Kinendriny amin'izany ny hanatratra ny fahombiazana ao amin'ny fidirana an-tsehatry ny fanjakana ary ianteherany ny fahamarinan-toerana ara-politika, ny filaminana, ny sehatra ara-toekarena faobe lonaka hanaovan-javatra, ny fampivoarana ny fotodrafitrasa ary ny fahazoana tombony amin'ny fidirana ao amin'ny tsenam-paritra.
Tohanan'ny firaisamonina iraisampirenena sy ireo andrim-panjakana lehibe ara-bola ny ezaky ny governemanta ivoariana. Nampanantena ny mpamatsy vola tamin'ny taona 2016 hanome fanampiana mitentina 15,4 miliara dôlara amin'ny endrika fanomezana sy fampindramam-bola hampandehanana ny PND. Niroso hampitombo avy roa heny ny fanohanany hitombo 5 miliara dôlara ny banky mondialy tamin'ny faran'ny taona 2017.
Ny sampandraharaha amerikana misahana ny fampandrosoana iraisampirenena (USAID) kosa tamin'ny febroary teo nanambara ny fanaovana soniam-pifanarahana vaovao miaraka amin'ny orinasa Entrepreneurial Solutions Partners (ESP) ho fampiroboroboana ny orinasa madinika sy salantsalany. Tokony hamorona asa miisa 2500, ka any amin'ny faritra ambanivohitra ny 1500 amin'izany, ny drafitra. Kendreny amin'izany ny:
hanavaozana ny fanombohan-draharaha amin'ny famoahana taranaka tanora sy vehivavy mpitarika.
Amin'io programa io, izay maharitra telo taona, nanolotra vola 360 tapitrisa farantsa CFA (690 498 dolara) ny USAID ary ampian'ny fandraisana anjaran'ny ESP mitentina 427 tapitrisa farantsa CFA (810 870 dolara) izany. Tafiditra ao anatin'ny fanampiana ankapobeny mitentina 380 tapitrisa dôlara izany fandraisana anjara izany.
Fanohanana ireo fanoitran'ny fitomboana
Etsy ankilany kosa i Côte d’Ivoire manohy ireo fanitsiana hanamafisany ny fahazoany fahavitrihana indray. Ahafahana mampihena ireo fihoarana ara-tetibola sy hanatsarana ny fitantanan-draharaham-panjakana, dia niroso ny governemanta tamin'ny fifehezana tsara kokoa ny fandaniany ao anatin'ny drafi-panitsiana ikendrena hampihenana ny fatiantoka eo amin'io sehatra io. Nisy fanaraha-maso taokaonty ihany koa natao hanitsiana ireo tsy-fetezan-javatra maro ao amin'ny tontolon'ny cacao.
Mihetsiketsika ny firenena, izay tafaray indray amin'ny fitomboana noho ireo loharanon-karenany ara-boajanahary, manoloana ny fidinan'ny vidin'ny voamaina sy ny akora hafa. Fanirian'ny governemanta ny mametraka hetsika maro hamelomana indray ny tontolon'ny kafe ary fanambiny ny hampakatra ny vola miditra amin'ny mpamokatra kafe avy amin'ny 60 miliara hankany amin'ny 180 miliara farantsa CFA manomboka izao ka hatramin'ny taona 2020. Tohanany ihany koa, ankoatra izay, ny ezaka ataon'ny Organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton (Intercoton). Manoloana ny fidinan'ny famokarana voan-dandihazo hatramin'ny 30 % (320 000 taonina tamin'ny taom-pambolena 2016-2017), dia namoaka drafi-panorona fampandrosoana ny sahatrasa ahafahany manatsara ny fepetran'ny asa sy ain'ny mpandray anjara rehetra.
Mitoky amin'ny teknolojia vaovao
Ao anivon'ny teti-panorina ivoariana ihany koa ny fampivelarana ny fotodrafitrasa. Tamin'ny volana oktobra farany teo ny praiminisitra Amadou Gon Coulibaly, nanambara ny hanaovana asa ao amin'ny distrikan'i Abidjan izay mitentina 475 miliara farantsa CFA. Ny tena voatondro amin'izany dia ny famerenana amin'ny laoniny ny tetezana Félix Houphouët-Boigny sy ny fananganana tetezana ambony lalana Akwaba, tetezana fahaefatra mampitohy ny Plateau [Lembalemba] amin'i Yopougon sy ireo lalambe mihodidina an'i Abidjan.
Tamin'ny desambra lasa teo kosa i Alassane Ouattara sy i Emmanuel Macron nanokatra ny asam-pananganana ny métro (lalambin’) ny renivohitra ara-toekarena ivoariana. Lafrantsa no manohana manontolo izany asa izany (hatramin'ny 1,4 miliara euros), ary tokony azo ampiasaina io métro an'i Abidjan io amin'ny taona 2022.
Manohy ny lalany mankany amin'ny satan'ny firenena afrikana matanjaka i Côte d’Ivoire. Mbola tratra aoriana kosa anefa ny sehatra tsy miankina eo amin'ny resaka fanavaozana. Araka ny Banky Mondialy :
Tsy niantefa tany amin'ny sofin'ny marenina anefa ny hafatry ny andrim-panjakana ara-bola iraisampirenena. Efa nampiseho fandrosoana eo amin'io lafiny io ny fitondrana ivoariana. Tamin'ny janoary lasa teo, napetraky ny governemanta ny « e-liasse », sehatra elekitrônikan'ny ivonketra ahafahan'ny orinasa madinika sy salasalany mametraka ny toe-bolany antserasera. Tokony ahafahan'ny fanjakana manorina lahatahiry azo itokisana ahitana ihany koa ny fandoavan-ketra natao io fitaovana io.
Fampiasam-bola any amin'ny teknolojia vaovao izay mahazo tombony avy amin'ny fahazoan'ny toekarenan'ny firenena aina.
[fanamarihana: navoakan'ny nandika ity lahatsoratra ity ho amin'ny teny malagasy ao amin'ny tranonkala teny frantsay ny heviny momba ity lahatsoratra ity, azonao atao ihany koa ny mamoaka ny hevitrao na eto na any]